DOWNLOAD PDF24 ONYE KERE N'EFU NA KỌMPUTA GỊ - MMEMME NYOCHA - 2019
PDF24 Onye Okike 8.4.1
Ebube na-ewu ewu na-ewu ewu ma bụrụ ụzọ dị mma isi gosipụta àgwà nke onye ọ bụla. E nwere ike ịdebe foto ndị dị otú a site n'aka ndị ọkachamara nka na mpaghara nka. Ma nke a bụ naanị mgbe ị bu n'obi inye mmadụ onyinye a na-echefu echefu. Ọfọn, ịmepụta foto ndị dị mfe na-atọ ọchị site na foto ahụ, ịnwere ike iji ọrụ ntanetị n'efu.
Otu esi eme ka eserese n'Ịntanet
Na Ịntanetị, e nwere ọtụtụ ebe ị na-enye iwu iji zipu eserese si na foto site na ndị ọkachamara (ma ọ bụghị ya). Ma n'isiokwu a, anyị agaghị atụle ihe ndị dị otú ahụ. Anyị nwere mmasị na ọrụ weebụ nke ị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa ma ọ bụ eserese site na iji foto nke ebudatara na kọmputa.
Usoro 1: Cartoon.Pho.to
Ngwaọrụ na-enweghị ike ịntanetị nke na-enye gị ohere ịmepụta eserese na-eme ihe nkiri site na foto foto dị na ntanetị abụọ. I nwekwara ike ịmepụta foto dị iche iche na mmetụta dị iche iche nke parody, tinyere otu eserese.
Ọrụ ịntanetị Cartoon.Pho.to
Iji tinye mmetụta na ihe oyiyi, buru ụzọ webata foto na Facebook site na njikọ, ma ọ bụ site na diski ike gị.
Lelee igbe "Ngbanwe nke ihu".
Ọ bụrụ na ịkwesighi iṅomi foto a dọtara aka, wepuchi nhọrọ ahụ "Ngosipụta ihu ọchị".
Nhọrọ nke ọtụtụ nhazi nke mmetụta na mmetụta plastik maka foto.
Iji mepụta eserese eserese, lelee ihe kwekọrọ na menu na ekpe. Mgbe ị nwetara ihe a choro, gaa na bọtịnụ bulite na iji bọtịnụ ahụ "Zọpụta na ịkekọrịta".
Na ibe nke mepere emepe, ị ga-ahụ foto a gbanyere mkpọrọgwụ na mkpebi na mma mbụ ya.
Iji chekwaa ya na kọmputa gị, pịa bọtịnụ ahụ. "Download".
Ihe kachasị mkpa nke ọrụ ahụ bụ njirimara zuru oke. Ọbụna ịkwesịrị iji aka dozie isi ihe ihu, dịka ọnụ, imi na anya. Cartoon.Pho.to ga-eme ya maka gị.
Usoro 2: PhotoFunia
Ihe a na-ewu ewu maka ịmepụta ihe nchịkọta foto. Ọrụ a nwere ike ịme ka eserese gị ọ bụla n'ebe ọ bụla, bụrụ ọbụma obodo ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ. E nwere na mmetụta nke caricature, mere dịka ihe osise pensụl.
Foto Ntanetị Online
Ịmepụta foto site na iji akụ a nwere ike bụrụ ngwa ngwa ma dị mfe.
Iji malite, pịa njikọ dị n'elu na na ibe nke mepere emepe, pịa bọtịnụ ahụ. "Họrọ foto".
Bubata foto site na otu netwọk mmekọrịta dịnụ ma ọ bụ gbakwunye foto site na diski ike gị site na ịpị "Download na kọmputa".
Họrọ ebe ịchọrọ na foto ebudatara ma pịa bọtịnụ ahụ. "Ubi".
Mgbe ahụ, iji nye onyinyo a mmetụta dị na caricature, lee igbe ahụ "Tinye ntughari" wee pịa "Mepụta".
A na-arụ ọrụ ntanetịime n'otu ntabi anya.
Foto zuru ezu, ị nwere ike ibudata ozugbo na kọmputa gị. Ndebanye aha na saịtị maka nke a abụghị ihe achọrọ. Naanị pịa bọtịnụ ahụ "Download" na elu aka nri.
Dịka ọrụ gara aga, PhotoFania na-achọta ihu na ihuenyo na-achọpụta ihe ụfọdụ dị na ya iji mee ka eserese na-ese onyinyo ahụ. Ihe ọzọ, ọrụ nke ọrụ ahụ agaghị echekwa na nchekwa kọmputa ahụ, kama ọ pụkwara iziga otu akwụkwọ ozi ozugbo, bipụta ma ọ bụ ọbụna ihe mkpuchi ya na foto a.
Usoro 3: Wish2Be
Ngwa ngwa weebụ a ọ bụghị naanị gbanwee ihe osise a ga - eme ka ọ rụọ ọrụ caricature, ma na-enye gị ohere iji ndebiri caricature emere nke ọma, bụ nke ọ na - anọgide na - agbakwunye ihu mmadụ ahụ achọrọ. Na Wish2Be, ị nwere ike ịrụ ọrụ n'ilekọta ma jikọta ihe ndị dị mkpa, dị ka ntutu isi, ozu, okpokolo agba, ọdịdị, wdg. A na-akwadokwa ederede ederede.
Wish2Be ọrụ ntanetị
Ịmepụta eserese site n'iji enyemaka a dị mfe.
Họrọ template achọrọ wee gaa taabụ. "Tinye foto"akpọrọ dị ka akara ngosi igwefoto.
Site na ịpị na mpaghara na mbinye aka "Pịa ma ọ bụ dobe foto gị ebe a", bulite na saịtị ahụ ihe achọrọ na diski ike.
Mgbe idezi caricature n'ụzọ kwesịrị ekwesị, jiri akara ngosi na obere ígwé ojii na akụ ahụ gaa na ibudata foto ahụ mechara na kọmputa.
Iji bulite ihe oyiyi, họrọ nanị usoro kwesịrị ekwesị.
A ga-edozi caricature ikpeazụ ma zọpụta ya na diski ike mgbe sekọnd ole na ole. Foto ndị e kere na Wish2Be bụ 550 × 550 pikselụ na nha ma nwee mmiri mmiri ọrụ.
Hụkwa: Gbanwee ọgụgụ na Photoshop
Dịka ị pụrụ ịhụ, ngwa ndị a tụlere n'elu abụghị ụdị ọrụ ha. Onye ọ bụla n'ime ha na-enye onwe ya nhazi algorithms na ọ dịghị onye a pụrụ ịkpọ ihe ngwọta zuru ụwa ọnụ. Otú ọ dị, anyị nwere olileanya na n'etiti ha ka ị ga-ahụ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị ga-anagide ọrụ ahụ.